Amazwe ase-Oceania | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Iziqondiso, Oceania
Umhlaba uhlukaniswe izifunda ezindawo futhi esinye sazo sinjalo Oceania. Lesi sifunda sifinyelela ku- womabili ama-hemispheres futhi kuhlala abantu ababalelwa ezigidini ezingama-41. Kepha, mangaki amazwe akhona, yiziphi izindawo ezivakashelwayo ezifihlayo, imaphi amasiko athuthukile lapho?
I-Oceania yisifunda esincane futhi esihlukahlukene, ngoba iqukethe umnotho othuthuke kakhulu neminye ehlwempu kakhulu. I-Austria noma iNew Zealand bese zihlala neVanuatu, iFiji noma iTonga, ngokwesibonelo. Izizwe eziyi-14 ezakha i-Oceania futhi namuhla sizokwazi ukuthi basinikelani.
2 Amazwe ase-Oceania
Ekuqaleni inani labantu base-Oceania lafika kule ndawo eminyakeni eyizinkulungwane ezingama-60 eyedlule, futhi Abantu baseYurophu bakwenza kuphela ngekhulu le-XNUMX, njengabahloli bamazwe namatilosi. Abahlali bokuqala abamhlophe bahlala emakhulwini eminyaka alandelayo.
Oceania kufaka phakathi i-Australasia, iMelanesia, iMicronesia nePolynesia. Ngaphakathi kweMicronesia kuneziQhingi zaseMariana, iCarolinas, iMarshall Islands, kanye neKiribati Islands. Ngaphakathi kweMelanesia kukhona iNew Guinea, iBismarck Archipelago, iSolomon Islands, iVanuatu, iFiji neNew Caledonia. IPolynesia isuka eHawaii iye eNew Zealand futhi ihlanganisa iTuvalu, iTokelau, iSamoa, iTonga, iziQhingi zaseKermadec, iziQhingi zaseCook, iSociety Islands, i-Austral, iMarquesas, iTuamotu, iMangareva, ne-Easter Island.
Okuningi iziqhingi ezakha i-Oceania zingaphansi kwepuleti lasePacific, ungcwecwe lwasolwandle olungaphansi kolwandle olungaphansi koLwandlekazi iPacific. Ngokwengxenye yayo, i-Australia iyingxenye yepuleti i-Indo-Australia, engesinye sezindawo zomhlaba ezindala kunazo zonke emhlabeni, kepha njengoba iphakathi kwepuleti ayinayo intaba-mlilo. Lokho kufana neNew Zealand nezinye iziqhingi, ezaziwa ngezintaba-mlilo zazo.
Zinjani izimbali zase-Oceania? Kuhluke kakhulu, kepha lokhu kwehlukahluka kuvame ukuba se-Australia, hhayi kuyo yonke indawo. I-Australia inamahlathi emvula, izintaba, amabhishi, izingwadule ezinezimila ezifana nalezi zindawo. Okufanayo nezilwane.
Sinjani isimo sezulu e-Oceania? Yebo, eziqhingini zasePacific kunalokho ezishisayol, nezimvula ezinkulu, izimvula ezivamile neziphepho. Kwezinye izingxenye, njengengxenye ethile yendawo yase-Australia kunogwadule, kunesimo sezulu esipholile, se-oceanic neMedithera. Lize likhithike ezintabeni.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi iziqhingi eziningi zasePacific, ngaphandle kweNew Zealand ne-Easter Island, zitholakala kule ndawo maphakathi nezindawo ezishisayo nenkabazwe. Lokhu kusho ukuthi kunesimo sezulu esifanayo, esinokuhluka okumbalwa kwezinga lokushisa ngokuya ngesizini.
Ekuqaleni sathi e-Oceania kunamazwe athuthukile namanye athuthukayo. A) Yebo, I-Australia neNew Zealand yizo kuphela izizwe ezithuthukile Kepha i-Australia inomnotho omkhulu futhi onamandla kunomakhelwane wayo. Ukungena i-capita yaleli lizwe isezingeni elilingana nelaseCanada noma iFrance, ngokwesibonelo, kanti imakethe yayo yamasheya iyona enesisindo esikhulu esifundeni saseNingizimu Pacific.
Ngokwengxenye yayo INew Zealand inomnotho womhlaba wonke futhi kuncike kakhulu ekuhwebeni kwamazwe omhlaba. Abantu bezizwe zombili bahlala, ikakhulukazi, kusuka embonini kagesi, ukukhiqiza kanye nezimayini. Kepha kuthiwani nge- iziqhingi zepacific? Lapha iningi labantu lisebenza endaweni yezinsizakalo, ikakhulukazi ezezimali nezokuvakasha.
Iziqhingi bakhiqiza kakhukhunathi, ukhuni, inyama, uwoyela wesundu, ukhokho, ushukela, ujinja, phakathi kweminye imikhiqizo, futhi ngokusobala igcina ubuhlobo obuseduze bezohwebo ne-Australia neNew Zealand nezizwe zesifunda sase-Asia Pacific.
Kepha sishilo lokho ezokuvakasha ziyinkanyezi lapha futhi kunjalo. Iningi lezivakashi e-Oceania zivela e-United States, e-United Kingdom nase-Japan. Amazwe avakashelwe kakhulungokusho kweWTO, World Tourism Organisation ngeSpanishi, yi-Australia, iNew Zealand neGuam.
I-Australia iyindawo enkulu yezokuvakasha yamazwe omhlaba, enabavakashi abacishe babe yizigidi eziyi-8 ngonyaka abeza ukuzobona iSydney Harbour ne-Opera House yayo, iGold Coast, iTasmania, iGreat Barrier Reef noma ugu lwaseVictoria noma I-Ayers Rock, isibonelo.
INew Zealand iyindawo ethandwayo futhi, ikakhulukazi njengoba imihlaba yayo ibiyisizinda se-Lord of the Rings trilogy. Iziqhingi zaseHawaii zithandwa unyaka wonke, ngenxa yamabhishi abo, izintaba-mlilo, amapaki abo kazwelonke.
Iqiniso ukuthi uma lesi sifunda siqukethe amazwe ayi-14, akunakwenzeka ukuwahambela wonke ngohambo olulodwa. Kepha uma ufuna ukuhlola indawo oya kuyo ehluke kakhulu kweYurophu, kufanele uhambe wazi ukuthi uzothola amasiko amaningi, izindawo eziningi zomhlaba, izilimi eziningi, izindlela zokupheka eziningi. Ngemali kuzoba lula ukukhokhela i-cruise endaweni ethile futhi uvakashele izindawo ezahlukahlukene, ngaphandle kwemali futhi ubhaka ubhaka ehlombe lakho, izindawo ziya ngokuya zincipha futhi sidinga ukwenza ukunyakaza okungcono kohlelo.
Kepha ngokuyisisekelo kulezi zinsuku I-Oceania yindawo ethandwayo yemibhangqwana, abangane nomndeni ngifuna amabhishi, izindawo zoku dive noma snorkel, imisebenzi ehlukahlukene yamanzi, ukubona izilwane zasolwandle, amakhorali ... ngamafuphi, kuhlale kungukukhululeka okukhululekile, ukuhamba kalula njengoba besho lapha.
Izindawo ezihanjelwa kakhulu ukuvakasha yiFrench Polynesia, eneziqhingi ezingaphezu kwekhulu, futhi Fiji, izwe eliqukethe nezinye iziqhingi ezingama-200. Lapha akukho okushibhile, kepha umfana yizindawo ezinhle, ezine- UMaui, uBora Bora… Ungaqala uhambo lwakho e-Australia bese usuka lapho ugxumele kwezinye izindawo, noma ugxile e-Australia naseNew Zealand, noma eziqhingini ezinkulu zePacific. Kufanele uthathe ibalazwe futhi uhlele kahle lapho ufuna ukuya khona ngoba, njengoba ngishilo, akunakwenzeka ukumboza yonke i-Oceania ngohambo olulodwa.
Uyafuna amadolobha esimanje? I-Australia noma iNew Zealand iyona ndawo okuyiwa kuyo. Ngabe ufuna i-coral reef enhle kakhulu emhlabeni? IGreat Barrier Reef e-Australia isendleleni yakho. Ngabe ufuna amabhishi okuphupha phakathi kwesiko lesiqhingi sasendulo esithulile nesasendulo? Yebo, iPolynesia neFiji. Ngabe ufuna ukuzizwa kahle kude nesixuku esihlanyayo? IKiribati, iSamoa nohlu luyaqhubeka. Uhambo oluhle!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Oceania » Amazwe ase-Oceania
IMeya yePlaza yaseSalamanca
Amazwe amakhulu kunawo wonke emhlabeni